India – SoShwe
စုဆောင်းထားတဲ့ အကြွေစေ့တွေနဲ့ ကားဝယ်ယူခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယအမျိုးသား။
အိန္ဒိယအမျိုးသားတစ်ဦးဟာ တန်ဖိုးကြီးကားတစ်စီးကို အကြွေစေ့များဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု လူမှုကွန်ယက်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလောက်က တမီးလ်နာဒူမြို့မှာတေထိုင်တဲ့ Vetrivel လို့ အမည်ရတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ Rs6သိန်းတန် (မြန်မာငွေ သိန်း ၁၄၀ ကျော်) ကားတစ်စီးကို Rs 10 တန် အကြွေစေ့တွေဖြင့် ဝယ်ပြီးနောက် လူမှုမီဒီယာပေါ်မှာ ရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အဆိုပါကားကို ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် အကြွေစေ့တွေကို တစ်လခန့် စုဆောင်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အကြွေစေ့အထုပ်နဲ့ ဓမ္မပူရီရှိ ကားအရောင်းဆိုင်ကို ကားဝယ်ဖို့ သွားရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်း ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံး အကြီးအကျယ် အံ့အားသင့်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Vetrivel ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူဟာ ကုန်စုံဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်ထားပြီး သူမအနေနဲ့ ဝယ်သူတွေပေးတဲ့ …
ထုတ်လုပ်ရေးအပိုင်းမှာ အခက်တွေ့နေတဲ့ Apple
ကိုဗစ်ကင်းစင်ရေးအတွက် တင်းကျပ်တဲ့ တရုတ်အစိုးရရဲ့ မူဝါဒတွေကြောင့် iPhone နဲ့ Mac ထုတ်ကုန်တွေ ထုတ်လုပ်ရေး နှောင့်နှေးနေတဲ့ Apple ဟာ တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပ ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးကို တိုးမြှင့်ဖို့အတွက် ထုတ်လုပ်သူတချို့ကို မှာကြားထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ The Wall Street Journal သတင်းအရ အိန္ဒိယနဲ့ ဗီယက်နမ်တို့ဟာ တရုတ်နိုင်ငံအစား Apple ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်ရေးမှာ အားကိုးစရာနိုင်ငံတွေ ဖြစ်လာတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဈေးကွက်တန်ဖိုးအရ အကြီးဆုံးအမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Apple ရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ အရေးကြီး ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေမှာ တရုတ်အပေါ် အားကိုးမှုကို လျှော့ချဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ တခြားအမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်အပေါ် ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဈေးကွက်လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေအရ iPhone ၊ …
မသေခင်ကြည့်သွားသင့်သော အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ။ (Trailer နဲ့တကွ)
Hollywood ပြီးရင် Bollywood ဆိုတဲ့အတိုင်း အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဟာလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုုင်အမာရရှိလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အိန္ဒိယဇာတ်ကားတွေ အောင်မြင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ဘာဖြစ်မလဲ ? ? ? ဇာတ်ညွှန်းကပဲ အရမ်းထူးဆန်းနေလို့လား ? ? ? ဒါမှမဟုတ် သဘာဝကျကျ ကကွက်တွေနဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးသီချင်းတွေကပဲ အရမ်းကောင်းလွန်းနေလို့လား ? ? ? ဒါမှမဟုတ် ဇာတ်ကားအစကနေအဆုံးထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်လို့လား စသဖြင့် ပရိ်သတ်များမှ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီိး ဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါတယ်။ အခုဆက်လက်ပြီး များသောအားဖြင့် ၂ နာရီကျော်ကြာတဲ့ အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားဟာ ကြည့်ရှုဖို့ ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနေတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို Trailer နဲ့တကွ …